YEKA: amazwe angama-80 kubandakanya i-UK, i-UAE, iFrance, i-Israel, iThailand, iAruba kuluhlu lokuhamba!
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » YEKA: amazwe angama-80 kubandakanya i-UK, i-UAE, iFrance, i-Israel, iThailand, iAruba kuluhlu lokuhamba!
Iindaba zeAruba Breaking • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba Eziphulayo Eswatini • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zaseFrench Polynesia eziziiNdaba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zase-Iceland zokuPhula • I-Israel Iphula Iindaba • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Sukuya eAruba, Eswatini, France, Iceland, Israel nase Thailand
Ngokutsho kweCDC, amazwe abekwe njenge- "COVID-19 ephezulu kakhulu" abe namatyala angaphezulu kwama-500 kubahlali abangama-100,000 kwiintsuku ezingama-28 ezidlulileyo. Abemi base-US akufuneki baye kula mazwe, ngaphandle kokuba bagonywe ngokupheleleyo. Namhlanje amazwe angama-7 ongezelelweyo kolu luhlu.
Uluhlu lwamazwe angama-80 anobungozi kakhulu ukuhamba ngalo ngeli xesha ngokweCDC
Abantu baseMelika bayalumkiswa malunga nomngcipheko ophezulu wokuhamba xa betyelele eFrance, Israel, Thailand, Aruba, Iceland nase Eswatini.
Uluhlu lwe-CDC oluhlaziya uluhlu lweendawo ezinobungozi obuphezulu, ukongeza iindawo zokundwendwela ezithandwayo kunye neendawo zokhenketho kuluhlu "lokuthintela ukuhamba" kuluhlu lwe-7 (isoyikiso esikhulu).
Urhulumente wase-US ucebisa ngamandla ukuba kuphela ngabantu baseMelika abagonywe ngokupheleleyo ukuba baye eFrance, Israel, Thailand, Aruba, Iceland nase-Eswatini
The Amaziko aseMelika oLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo (CDC) namhlanje ibhengeze ukongezwa kwamanye amazwe asixhenxe kuluhlu 'lwenqanaba 4' lawo athi abeka eyona ngozi isoyikisayo kubakhenkethi.
Kwisikhokelo sayo, iCDC icebisa ukuthintela ngokupheleleyo ukuhamba ukuya kwiindawo ezibhalwe, "Inqanaba 4: I-COVID-19 ephezulu kakhulu," nkqu nakwabahambi abagonywe ngokupheleleyo.
Ngokutsho kweCDC, amazwe abekwe njenge- "COVID-19 ephezulu kakhulu" abe namatyala angaphezulu kwama-500 kubahlali abangama-100,000 kwiintsuku ezingama-28 ezidlulileyo.
Amazwe ayi-7 asandula ukongezwa kwi- CDC Inqanaba le-4: Uluhlu lwe-COVID-19 ephezulu kakhulu "ukusukela nge-9 ka-Agasti ka-2021, yile:
Umlawuli wase-US ukwathi nabaphi na abantu baseMelika ekufuneka beye kwezi ndawo kufuneka bagonywe ngokupheleleyo.
“Abahambi abagonywe ngokupheleleyo kunqabile ukuba bafumane kwaye basasaze i-COVID-19. Nangona kunjalo, ukhenketho lwamazwe aphesheya lubeka umngcipheko owongezelelekileyo, kwaye abahambi abagonywe ngokupheleleyo banokuba semngciphekweni omkhulu wokufumana nokusasaza ezinye ze-COVID-19, ”utshilo. CDC kwisikhokelo sayo.
Kwiveki ephelile CDC yongeze amazwe angama-16 kudidi lomngcipheko "ophezulu kakhulu". Umbutho uhlaziya rhoqo uluhlu lwezaziso zokuhamba ukusuka kwiNqanaba 1 ("phantsi") ukuya kwiNqanaba 4 ("phezulu kakhulu").
Okwangoku, iCDC ilumkisa abemi baseMelika ukuba baye kula mazwe alandelayo nakwimimandla. Okumangalisayo kukuba kubandakanya iiVirgin Islands zase-US, eziyinxalenye ye-United States.
Olu luluhlu olupheleleyo lwamacandelo ama-4 amazwe ngokweZiko loLawulo lwezifo eMelika.
SUKUHAMBA ukuya kumazwe angama-80 adweliswe:
UMorten Litthau Jensen uthi:
Agasti 11, 2021 kwi-21: 02
Amanye amazwe ongenakukwazi ukuya kuwo
Ngaphandle kokuba ugonywe ngokupheleleyo lelinye lawona mazwe agonyelweyo kwihlabathi.
UGqr Basava uthi:
Agasti 10, 2021 kwi-20: 32
Kuthekani ngeRashiya neUkraine?
Ngaba kulungile ngokugonywa ngokupheleleyo?